Hu Onipa Ko a Ɛsɛ Sɛ Woyɛ | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Russian Sign Language Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“Munhu nnipa ko a ɛsɛ sɛ moyɛ wɔ abrabɔ kronkron ne onyamesom pa mu.”—2 PET. 3:11.
Sɛ wopɛ sɛ Onyankopɔn gye wo tom a, onipa bɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ?
Ɔkwan bɛn na Satan fa so to nnipa brada?
Dɛn na wobɛyɛ na wo ne Yehowa ntam ansɛe?
1, 2. ‘Nnipa bɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ’ na Onyankopɔn agye yɛn atom?
ONIPA biara pɛ sɛ ohu sɛnea nkurɔfo bu no anaa wohu no. Nanso Kristofo deɛ ɛnyɛ sɛnea afoforo hu yɛn na ehia yɛn, na mmom sɛnea Yehowa hu yɛn. Ɛnsɛ sɛ eyi yɛ yɛn nwonwa efisɛ Yehowa ne ade nyinaa so Tumfoɔ pumpuni no, na ne “nkyɛn na nkwa nsuti wɔ.”—Dw. 36:9.
2 Ɔsomafo Petro sii so dua sɛ, sɛ yɛpɛ sɛ Yehowa gye yɛn tom a, ehia sɛ yɛde “abrabɔ kronkron ne onyamesom pa” tena ase. (Monkenkan 2 Petro 3:11.) Sɛ yɛn ‘abrabɔ bɛyɛ kronkron’ a, ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ho tew wɔ biribiara mu a efĩ biara nni ho—yɛn adwenem mu oo, yɛn som mu oo, ɛnsɛ sɛ nkekae biara ba yɛn ho. Bio, ehia sɛ yɛde “onyamesom pa” bɔ yɛn bra, kyerɛ sɛ, ɛsɛ sɛ yɛde obu ne fɛre som Onyankopɔn na yɛkɔ so bata ne ho. Eyi kyerɛ sɛ, sɛ Onyankopɔn begye yɛn atom a ɛnyɛ yɛn abrabɔ nko ara na ɔhwɛ, na mmom sɛnea yɛte wɔ komam. Yehowa ‘hwehwɛ komam,’ enti sɛ yɛn abrabɔ yɛ kronkron a, onim, na sɛ yɛde yɛn koma resom ɔno nkutoo nso a, onim.—1 Be. 29:17.
3. Nsɛm bɛn na ɛsɛ sɛ yebisa yɛn ho?
3 Satan Bonsam mpɛ sɛ yɛyɛ ade a ɛbɛma Onyankopɔn ani agye yɛn ho. Nokwasɛm ne sɛ Satan fa akwannuasa nyinaa so sɛ ɔbɛsɛe yɛne Yehowa ntam. Nea esi n’ani so daa ne sɛ ɔde nnaadaa ne bradato bɛma yɛagyae Onyankopɔn som. (Yoh. 8:44; 2 Kor. 11:13-15) Eyi nti ɛsɛ sɛ yebisa yɛn ho sɛ: ‘Ɔkwan bɛn na Satan fa so daadaa nnipa anaa ɔto wɔn brada? Dɛn na yɛbɛyɛ na biribiara ansɛe yɛne Yehowa ntam?’
4. Satan pɛ sɛ ɔsɛe yɛne Onyankopɔn ntam a, dɛn na ɔyɛ? Adɛn ntia?
4 Osuani Yakobo kyerɛwee sɛ: “Nea ɛsɔ obi hwɛ ne n’ankasa akɔnnɔ a ɛtwetwe no na ɛto no brada.” Afei “sɛ akɔnnɔ no nyinsɛn a, ɛwo bɔne; na bɔne no nso nyin a, ɛwo owu.” (Yak. 1:14, 15) Akɔnnɔ nyinaa farebae ne yɛn koma, enti Satan pɛ sɛ owia yɛn koma sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛtetew yɛne Onyankopɔn ntam.
5, 6. (a) Ɔkwan bɛn na Satan fa so nya yɛn koma? (b) Nneɛma abiɛsa bɛn na Satan bɔ mmɔden sɛ ɔde bɛsɛe yɛn koma? Adɛn nti na yebetumi aka sɛ waben mu paa?
5 Ɔkwan bɛn na Satan fa so nya yɛn koma? Bible ka sɛ: “Wiase nyinaa da ɔbɔnefo no tumi mu.” (1 Yoh. 5:19) Ade biako a Satan de to nnipa brada ne “nea ɛwɔ wiase” anaa wiase nneɛma. (Monkenkan 1 Yohane 2:15, 16.) Mfe mpempem pii na Bonsam de anifere anwene mfiri apete wiase baabiara. Wiase yi mu ara na yɛte, enti ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yɛn anammɔntutu yiye na Ɔbonsam anto yɛn brada amma yɛantɔ n’afiri mu.—Yoh. 17:15.
6 Satan bɔ mmɔden sɛ ɔde akɔnnɔ bɔne bɛsɛe yɛn koma. Ɔsomafo Yohane ma yehu nneɛma abiɛsa bi a Satan de twetwe yɛn: (1) “ɔhonam akɔnnɔ,” (2) “aniwa akɔnnɔ,” ne (3) “asetena mu nneɛma a nnipa de hoahoa wɔn ho.” Satan de saa nneɛma abiɛsa yi sɔɔ Yesu hwɛe wɔ sare no so. Ɔde saa mfiri yi ayɛ adwuma mfe pii, enti waben mu paa. Onim onipa biara ne ne so afiri. Yɛbɛhwɛ nea yɛbɛyɛ de abɔ yɛn ho ban wɔ ne mfiri no ho, nanso ansa na yɛbɛyɛ saa no, momma yɛnhwɛ sɛnea Ɔbonsam tumi too Hawa brada nanso wantumi annya Onyankopɔn Ba no.
Hawa ahwease nyinaa fi “ɔhonam akɔnnɔ” (Hwɛ nkyekyɛm 7)
7. Ɔkwan bɛn na Satan faa so de “ɔhonam akɔnnɔ” sɔɔ Hawa hwɛe?
7 Onipa biara hia aduan na watumi akɔ so atena ase. Ɔbɔadeɛ no nwenee asase sɛ ɛmma nnɔbae pii. Satan nim sɛ nnipa pɛ aduan, enti ɔbɔ mmɔden sɛ ɔde aduan bɛsɔ yɛn ahwɛ ma yɛayɛ biribi a Onyankopɔn ani nnye ho. Momma yɛnhwɛ sɛnea ɔde eyi sum Hawa afiri. (Monkenkan Genesis 3:1-6.) Satan ka kyerɛɛ Hawa sɛ, sɛ odi “papa ne bɔne ho nimdeɛ dua” aba no bi a, ɔrenwu, na mmom ɛda a obedi bi no ɔbɛyɛ sɛ Onyankopɔn. (Gen. 2:9) Nea na Ɔbonsam repɛ akyerɛ ne sɛ enhia sɛ Hawa tie Onyankopɔn na watumi atena ase. Eyi yɛ nkontompo ne nnaadaasɛm ankasa! Bere a Ɔbonsam de saa nnaadaasɛm no hyɛɛ Hawa tirim no, na nneɛma abien bi wɔ hɔ a Hawa betumi ayɛ: Nea edi kan, anka obetumi apo saa asɛm no. Nea ɛto so abien, ɔpɛ a ɔbɛkɔ so adwinnwen ho ma ne kɔn adɔ aduaba no. Ná nnuaba pii wɔ turom hɔ a anka obetumi atew bi adi nanso asɛm a Satan kae nti ɔde n’adwene nyinaa sii dua a esi turo no mfinimfini no so. Enti “ɔtew n’aba no bi na odii.” Satan maa Hawa kɔn dɔɔ biribi a ne Bɔfo no abara.
Yesu amma biribiara antwetwe n’adwene (Hwɛ nkyekyɛm 8)
8. Ɔkwan bɛn na Satan faa so sɛ ɔde “ɔhonam akɔnnɔ” bɛto Yesu brada? Adɛn nti na Satan annya Yesu?
8 Ɔkwan koro no ara na Satan yɛe sɛ ɔbɛfa so asɔ Yesu ahwɛ wɔ sare no so. Bere a Yesu kyenee kɔm adaduanan, awia ne anadwo no, Satan bɔɔ mmɔden sɛ ɔde aduan bɛsɔ no ahwɛ. Satan kae sɛ: “Sɛ woyɛ Onyankopɔn ba a, kasa kyerɛ ɔbo yi ma ɛnnan paanoo.” (Luka 4:1-3) Na nneɛma abien bi wɔ hɔ a Yesu betumi ayɛ: Ɔpɛ a ɔremfa tumi a ɔwɔ mpɛ aduan; ɔpɛ nso a ɔbɛyɛ saa. Na Yesu nim sɛ ɛnsɛ sɛ ɔde ne tumi pɛ ɔno ara akɔnnɔde. Na ɔkɔm de no deɛ, nanso na ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ biribiara asɛe ɔne Yehowa ntam. Yesu kae sɛ: “Wɔakyerɛw sɛ, ‘Ɛnyɛ paanoo nkutoo so na onipa nam bɛtena ase, na mmom asɛm biara a efi Yehowa anom nso.’”—Mat. 4:4.
9. Dɛn ne “aniwa akɔnnɔ”? Ɔkwan bɛn na Satan faa so de “aniwa akɔnnɔ” daadaa Hawa?
9 Yohane kae sɛ “aniwa akɔnnɔ” nso yɛ ade foforo a Satan de to brada. Obi hwɛ biribi kɛkɛ a, ebetumi ama wanya ho akɔnnɔ. Saa akɔnnɔ yi na Satan de daadaa Hawa. Ɔka kyerɛɛ Hawa sɛ da a obedi aduaba no bi no ‘n’ani bebue.’ Hawa rehwɛ aduaba no nyinaa na ɛreyɛ no akɔnnɔ. Enti ohui sɛ dua no yɛ fɛ na “ɛyɛ akɔnnɔ.”
10. Ɔkwan bɛn so na Satan de “aniwa akɔnnɔ” sɔɔ Yesu hwɛe? Dɛn na Yesu yɛe wɔ ho?
10 Yesu nso ɛ? Satan “kɔkyerɛɛ no asase so ahenni nyinaa prɛko; na Ɔbonsam ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Mede tumi yi nyinaa ne ɛho anuonyam bɛma wo.’” (Luka 4:5, 6) Yesu amfa n’ani ankasa anhu wiase ahenni nyinaa prɛko, na mmom Satan yii ahenni no ho anuonyam kyerɛɛ Yesu wɔ anisoadehu mu. Na Satan susuw sɛ nea Yesu behu no bɛyɛ n’akɔnnɔ. Ɔka kyerɛɛ Yesu sɛ: “Sɛ wobɔ wo mu ase som me a, ne nyinaa bɛyɛ wo de.” (Luka 4:7) Yesu nyɛ obi a Satan betumi de eyi ayi no da. Yesu yii Satan ano ntɛm ara sɛ: “Wɔakyerɛw sɛ, ‘Yehowa wo Nyankopɔn na ɛsɛ sɛ wokotow no, na ɔno nkutoo na ɛsɛ sɛ wosom no.’”—Luka 4:8.
“ASETENA MU NNEƐMA A NNIPA DE HOAHOA WƆN HO”
11. Ɛyɛɛ dɛn na Satan nyaa Hawa?
11 Yohane kae sɛ nea ɛwɔ wiase no bi ne “asetena mu nneɛma a nnipa de hoahoa wɔn ho.” Bere a Adam ne Hawa nkutoo wɔ asase so no, na wɔrentumi mfa ‘nneɛma a wɔwɔ nhoahoa wɔn ho’ nkyerɛ obiara. Nanso wɔmaa ahantan didii wɔn mu. Satan daadaa Hawa ma onyaa adwene sɛ Onyankopɔn de adepa bi rekame no. Ɔbonsam ka kyerɛɛ no sɛ da a obedi “papa ne bɔne ho nimdeɛ dua” no bi no, ɔbɛyɛ “sɛ Onyankopɔn ahu papa ne bɔne.” (Gen. 2:17; 3:5) Na Satan pɛ sɛ Hawa nya adwene sɛ onhia Yehowa wɔ n’abrabɔ mu. Ɛbɛyɛ sɛ ahantan ka ho bi na Hawa gyee nkontomposɛm a ɛte saa dii. Hawa dii aduaba a na Yehowa abara no, na n’adwene yɛɛ no sɛ ɔrenwu da. Nanso na ɔredaadaa ɔno ara ne ho!
12. Dɛn bio na Satan de sɔɔ Yesu hwɛe? Dɛn na Yesu yɛe?
12 Yesu anyɛ n’ade sɛ Hawa koraa; nokwasɛm ne sɛ yɛreka ahobrɛase a, na Yesu wɔ bi papaapa! Satan de biribi foforo sɔɔ Yesu hwɛe, nanso Yesu anyɛ biribiara ampɛ anuonyam amma ne ho. Na Yesu mpɛ sɛ ɔsɔ Onyankopɔn hwɛ wɔ ɔkwan biara so. Ɔyɛɛ saa a, anka ɛbɛkyerɛ sɛ ɔyɛ ahantan. Yesu maa Satan mmuae tee sɛ: “Wɔaka sɛ, ‘Nsɔ Yehowa wo Nyankopɔn nhwɛ.’”—Monkenkan Luka 4:9-12.
DƐN NA YƐBƐYƐ NA YƐNE YEHOWA NTAM ANSƐE?
13, 14. Ɔkwan bɛn na Satan fa so sɔ yɛn hwɛ nnɛ?
13 Nneɛma a Satan de sɔɔ Hawa ne Yesu hwɛe no, ɛno ara bi na nnɛ nso ɔde to yɛn brada. Ɔbonsam de “ɔhonam akɔnnɔ” twetwe nnipa ma wobu bra bɔne, na wodidi fuu nom nsa tra so. Ɔbonsam nim sɛ ani pɛ nhwɛ, enti ɔde “aniwa akɔnnɔ” twetwe nnipa a wɔn ani nna wɔn ho so ma wɔhwɛ aguamansɛm, ɛnkanka Intanɛt so aguamansɛm. Sɛ obi ma ne ho so anaa ɔde ‘asetena mu nneɛma hoahoa ne ho’ a, ɛnyɛ den koraa sɛ Satan benya no ma wafom wiase ahonyade, na wapɛ tumi, din, anaa anuonyam!
Sɛ wuhyia tebea a ɛte sɛɛ a, kyerɛw nsɛm bɛn na ɛsɛ sɛ wokae? (Hwɛ nkyekyɛm 13, 14)
14 Satan de ‘wiase nneɛma’ sum afiri sɛnea mpataayifo de nam yi mpataa no. Apataa no hu nam no a, ɛtwe no, nanso onnim sɛ darewa hyɛ nam no mu. Satan pɛ sɛ ɔde nneɛma a yɛyɛ no daa a ayɛ sɛ asɛm biara nni ho to yɛn brada ma yebu Onyankopɔn mmara so. Nanso eyi yɛ anifere kwan a Satan fa so kanyan yɛn akɔnnɔ na ɔsɛe yɛn koma. Ɔpɛ sɛ yepia Onyankopɔn apɛde to nkyɛn na yenya adwene sɛ nea ehia paa wɔ asetenam ne sɛ yebedwudwo yɛn ho na yɛahwehwɛ nea yɛpɛ. Wobɛma Satan afiri yi ayi wo anaa?
15. Yɛbɛyɛ dɛn asuasua Yesu na yɛako atia Satan nnɛɛdɛe?
15 Hawa gyaa ne ho maa Satan afiri yii no, nanso Yesu amma Satan kwan koraa. Bere biara a Satan yɛe sɛ ɔbɛto Yesu brada no, Yesu de Bible mu asɛm yii n’ano sɛ: “Wɔakyerɛw sɛ” anaa “wɔaka sɛ.” Sɛ yɛyɛ nnipa a yegye bere sua Bible a, yebehu mu nsɛm yiye, na sɛ biribi retwetwe yɛn akɔ bɔne mu a, yɛbɛkae kyerɛw nsɛm bi a ɛbɛboa yɛn ma yɛagyina yɛn nan so pintinn. (Dw. 1:1, 2) Onyankopɔn asomfo anokwafo pii ho nsɛm wɔ Bible mu, na sɛ yɛhwɛ wɔn suasua wɔn a, ɛbɛboa yɛn ma yɛakɔ so abata Onyankopɔn ho. (Rom. 15:4) Sɛ yesuro Yehowa ampa na yɛdɔ nea ɔdɔ na yekyi nea okyi a, ɛbɛbɔ yɛn ho ban.—Dw. 97:10.
16, 17. Adɛn nti na nneɛma a ‘yedwen’ ho betumi akyerɛ nnipa ko a yɛbɛyɛ?
16 Ɔsomafo Paulo hyɛ yɛn nkuran sɛ yɛmma Nyankopɔn nwene yɛn “adwene” sɛnea ɛbɛyɛ a yebesusuw nneɛma ho sɛ Nyankopɔn na ɛnyɛ wiase no. (Rom. 12:1, 2) Paulo sii so dua sɛ ehia sɛ yenya yɛn nsusuwii so tumi. Ɔkae sɛ: “Yɛretutu nsusuwii ne ade a ɛkorɔn biara a wɔama so atia Onyankopɔn nimdeɛ agu; na yɛfa nsusuwii nyinaa nnommum ma ɛyɛ setie ma Kristo.” (2 Kor. 10:5) Nneɛma a yɛde hyɛ yɛn adwenem na ɛbɛkyerɛ nnipa ko a yɛbɛyɛ, enti ɛsɛ sɛ ‘yɛkɔ so susuw’ nneɛma a ɛhyɛ nkuran ho.—Filip. 4:8.
17 Sɛ yɛpɛ sɛ yɛn abrabɔ yɛ kronkron a, ɛnsɛ sɛ yɛde nsusuwii bɔne anaa nneɛma a ɛho ntew hyɛ yɛn adwenem. Ɛsɛ sɛ yɛde “koma a emu tew” som Yehowa. (1 Tim. 1:5) Nanso yɛnkae sɛ koma yɛ okontomponi, enti ebia yɛrenhu mpo sɛ “nneɛma a ɛwɔ wiase” redidi yɛn ase. (Yer. 17:9) Eyi nti momma ‘yɛnkɔ so ara nsɔ nhwɛ sɛ yɛwɔ gyidi no mu anaa, na yɛnkɔ so mpɛɛpɛɛ yɛn mu nhwɛ.’ Kyerɛwnsɛm no betumi aboa yɛn ma yɛapɛɛpɛɛ yɛn mu, enti sɛ yɛresua Bible a yemmisa yɛn ho sɛ, ‘Me nsusuwii ne nneɛma a m’ani gye ho sɔ Onyankopɔn ani’?—2 Kor. 13:5.
18, 19. Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yesi nketekrakye sɛ yɛbɛyɛ nnipa a Yehowa gye yɛn tom?
18 Ade foforo a ɛbɛboa yɛn na “nneɛma a ɛwɔ wiase” amfa yɛn dommum ne sɛ yebetie Yohane asɛm yi: “Wiase ne n’akɔnnɔ retwam, na nea ɔyɛ ade a Onyankopɔn pɛ no tena hɔ daa.” (1 Yoh. 2:17) Wohwɛ Satan wiase no a wobɛka sɛ ɛbɛtena hɔ afebɔɔ, nanso da koro pɛ ne nyinaa bɛdan abutuw. Biribiara nni Satan wiase yi mu a ɛbɛkyene boɔ. Sɛ yɛma eyi tena yɛn adwenem a, ɛbɛhyɛ yɛn mpamden ma yɛako atia Ɔbonsam nnɛɛdɛe biara.
19 Ɔsomafo Petro tu yɛn fo sɛ yɛmmɔ bra a ɛbɛma Onyankopɔn agye yɛn atom ‘bere a yɛretwɛn na yɛma Yehowa da no ba yɛ ntɛm yɛn adwenem, ɛda a ɔsoro bɛsɔ ogya asɛe na emu nneɛma a adɔ ayɛ kɔɔ no bɛnan no!’ (2 Pet. 3:12) Ɛrenkyɛ koraa saa da no beyi ne ti, na Yehowa bɛsɛe Satan wiase no korakora; ɛho biribiara renka. Nanso mpɛn dodow a saa da no mmae yi, Satan bɛkɔ so de “nneɛma a ɛwɔ wiase” asɔ yɛn ahwɛ sɛnea ɔde sɔɔ Hawa ne Yesu hwɛe no. Ɛnsɛ sɛ yesuasua Hawa na yedi yɛn akɔnnɔ akyi da. Yɛyɛ saa a, na yɛde Satan reyɛ yɛn nyame. Ɛsɛ sɛ yesuasua Yesu na yɛde yɛn nan si fam ko tia biribiara a Satan de bɛsɔ yɛn ahwɛ; sɛ dekode no yɛ fɛ na ɛyɛ akɔnnɔ sɛ dɛn koraa a, ɛsɛ sɛ yɛpo no ntɛm ara. Momma yɛn mu biara nsi nketekrakye sɛ ɔbɛyɛ onipa a Yehowa gye no tom.